'Jijjiiramichi daandiirraa maqeera jedheen amana' jedha Aartist Taammaany Bayyana - BBC News Afaan Oromoo
'Jijjiiramichi daandiirraa maqeera jedheen amana' jedha Aartist Taammaany Bayyana
21 Onkololeessa 2019
Image copyright GHION JOURNAL
Aartist Taammaany Bayyane ogummaa aartii, gaazexeessummaafi mirga dhala namaaf falmuudhaan beekama.
Dhiibbaa siyaasaatiin biyyaa ba'ee yeroo dheeraaf biyya bakkee jiraachaa kan ture aartist Taammany Bayyane waggoota hedduuf mootummaa Itoophiyaa qeeqaa, mormaa tureera.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gara aangootti erga dhufanii jireenya baqaa waggaa 22 booda gara Itoophiyaa kan seene Aartist Taammanyi jijjiirama mootummaan eegale deeggaruuf tattaaffii gochaa tureera.
Irreecha barana magaalaa Finfinneetti kabajamerratti ergaa Pirezidaantii Itti-Aanaa mootuummaa naannoo Oromiyaarratti yaadni Taammany barreesse akkaan qeeqameera, ijoo dubbiis ta'eera.
Aartisti Taammaany Bayyane kan yeroo dheeraaf badee tures ajandaa kanaan as ba'eera.
Dirree miidiyaa Itoophiyaa keessatti maaltu jijjiirame?
'ADWUI'n laafeera jettanii hin dogoggorinaa' MM Dr. Abiy
Aartisti Taammaanyi Bayyane maaliif akka sagaleensaa badee ture wayita dubbatu, ''Wayita gara biyyaa akka seennuuf nuuf iyyamame guyyoota 27 Itoophiyaa keessa tureera.
Wayita sana rakkoo Buraayyuutti mudateen namoota miidhamaniif deggersa walitti qabaan ture. Utuun hin boqotin yeroon dhume,'' jedha.
Isa booda gara Ameerikaatti akkuma deebi'een rakkoo Gujiifi Geedi'oo keessatti mudateen namoota miidhamaniif deggersa walitti qabaa turuusaa kan dubbatu Taammaany dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa 'World Vision' jedhamu waliin ta'uun garas imalee deggersa kennaa akka ture dubbateera.
Isa boodas ittuma fufee namoota sababa garagaraan rakkoo keessa galan gargaaraa turuusaa dubbateera, hojii gargaarsaa kana hanga Waxabajjii darbeetti hojjecha turuusaa dubbata Aartist Taammaany.
Ji'oota arfan darbaniif badee akka ture kan dubbatu Taammaany sababoota akka baduuf isa dirqamsiisan ibseera.
Riifoormiin MM Abiy garaagarummaa saboota saaxile
Jawaariifi Dr. Abiy kophaatti maal mari'atan?
''Ji'oonni arfan kunneen anaaf yeroo qormaataa hamaa turan. Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Amaaraa duraanii Obbo Ambaachaw Mokonnin dabalatee hiriyoonni an haalaan itti dhiyaadhu ajjeefamuun isaanii anaaf qormaata jabaa ture.
Kan biraan ammoo miidiyaa an waggoota ja'aaf boqonnaa malee hojjedhee guddisee asiin ga'e ESAT keessaa ba'eera.
Miidiyaa kana keessatti itti gaafatamummaarran ture. Wayitan hojii kiyya xumuree garas deebi'u haalonni jijjiiramanii na eeegan.
Har'aan dubbadha, itti-gaafatamummaa kiyya gadi dhiisee ba'eera.''
Kun hundi anaaf miidhaa qaamaafi qalbii turan.
''Haalli jiru waan abdii na kutachiiseef fedhii kiyyaan miidiyaa kana gadi dhiiseera. Falmiifi atakaaroo hin barbaachisne keessa seenuurra callisuu wayya jedheen hanga yoonaa sagalee koo balleeffadhee ture.''
Taammaany jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru akkamitti ilaala?
Erga Ministirri Muummee Abiy Ahmad aangoo qabatanii jijjiiramoota mul'atan irratti yaada kan kenne Taammaany miira deggersaa guyyoota gara jalqabaa jiran safarree amma baruu baruu baannullee yaada hundaaf fayyadu qabatanii dhiyaataniiru jedha.
''Yaadonni akka araaraa, jaalalaa, tokkummaa, walqabatanii deemuu jedhan kunneen lammiilee Itoophiyaa biratti fudhatama argataniiru jedheen yaada. Hunda ta'uu baatullee dhibbeentaa 90 itti walii galaniiru yoon jedhe dhugaarraa hin fagaatu.''
''Seenaa biyya kanaa keessatti haaloo walirratti ba'uun rakkoo uumamaa ture , madaa nu gidduu ture dagannee jaalaalaa fi dhiifaman gara fuulduraatti ni ceena yaada jedhu anis akka dhuunfaa kootti fudheera.
Wayita ammaa garuu qaamoleen siyaasaa saba of duuba hiriirsuun qoqqoodiinsa uumaa jiru, kanarraa kan ka'e lammummaa Itoophiyaallee kanneen waakkatan jira.
Lammiileen biyyattii akka fedhanitti socho'anii jiraachuun yaaddoo ta'eera. Qe'eerraa wal buqqisuun daranuu hammaateera. Kun akka hafuuf wayitan akka dhuunfaa koottillee aanga'oota mariisisaa turetti deebii abdachiisaa hin arganne.
Waan akeeknee kaane ta'aa hin jiru. Jijjiiramichi daandiisaa gadi dhiiseera jedheen yaada.''
Haala qabatamaa amma lafarra jiruun Ministirri Muummee Abiy Ahmad waan wayita aangootti dhufan waadaa seenan gara hojiitti hiikaa akka hin jirre kan dubbatu Taammaany, ''Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf nama waan gaarii yaadan, imimmaan haadholii kan qoorsan, yaadota ijaaroofi miira abdii qabatanii dhufan se'ee yaadeen deggeree ture.
Amma garuu namoonni sabummaadhaan walqoodanii waan fedhasaanii gochaa jiru. Dr. Abiy aangoo seeraan kennameef fayyadamanii waan kana dhaabsisaa hin jiran. Kunimmoo biyyattii gara hin taanetti oofa jedheen yaada.''
Badhaasa Noobelii Nageenyaa MM Abiy argatan irratti
Ministirri Muummee Abiy Ahmad badhaasa Noobelii Nageenyaa argachuu isaanii wayitan dhagahu anis akkuma lammiilee Itoophiyaa kanneen biroo gammadeera jedha Taammaany.
''Biyya koo maqaashee olkaasanii haala kanaan waamsisuu isaaniitti gammadeera 'baga gammaddan' jedheeraan.''
''Battaluma Dr. Abiy badhaasa sana argtanimmoo lammiileen biyyattii sagaleen keenya haa dhaga'amu jechuun mormii dhageessisuu isaaniitiin hidhamaa turan, gama biraan ammoo kanneen isaan deggeran kaan hacuucaa turan.
Kun tasumaa waan ta'uu qabu miti, kun nu hin jiraachisu, daandii gadi dhiiseera. Dr. Abiy kana taa'anii ilaalanii jijjiiramichi akkamiin deemuu qabu kan jedhurratti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin mari'achuu qabu.
Ta'uu baannaan haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu kan nama gammachiisu miti.''
Image copyright Jhony video
Aartist Taammaany Bayyana waa'ee filannoo biyyalessaa as adeemuu irratti wayita yaada kennu wayita lammiileen biyyattii akka fedhanitti socho'anii jiraachuu dadhabanitti filannoon ni gaggeeffama jedhanii yaaduun abjuudha jedha.
''Biyya akka feetetti walabummaadhaan sodaa malee keessa sochootu miti. Lammiileen gargar baafamanii ilaalamu. Tokko guutuu kaanimmoo maxxantuu, akkasitti filannoon gaggeeffamu hin jiru''
''Filannoo gaggeessuun hafee namoota yakka dalaganillee seeratti dhiyeessuun hin danda'amne bar. Haala kana keessatti akkamiin filannoon gaggeeffamaree. Anaaf naaf hin galu. Gonkumaa ta'uu hin danda'u''
Irreecha Finfinneerratti dubbii Pirezidaantii Naannoo Oromiyaafi yaada Taammaany
Skip Facebook post by Tamagne Beyene
ይድረስ ለኢትዮጵያዊያን ወገኖቼ ሰብረውንም ከሆነ ነገ ይታያል።ለምን እነሱ በጮሁ ቁጥር መልስ እንሰጣለን። እንደ አርቆ አስተዋዮቹ አባቶቻችን ሰርተን እንገኝ ።መፍትሄው አንድ ብቻ ነው። እንደራጅ!!!!!!!!
Posted by Tamagne Beyene on Saturday, 5 October 2019
End of Facebook post by Tamagne Beyene
Wayita Irreechi magaalaa Finfinneetti kabajametti erga Pirezidaantii Itti-Aanaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabarsan irratti yaadi inni barreesse ajandaa guddaa kan uume Taammany barreeffamichi kansaa ta'uu mirkaneesseera.
Mirga dhala namaaf falma utuu jedhamuu akkamiin saba tokkoof loogee barreesse jedhanii namoonni gaaffii kaasu, kanarratti maal jetta jennee gaafanneerra.
''Gaaffii sirriidha. An ijaaramnee haa qophoofnu kanan jedheef Itoophiyaa keessatti diddiigamuun akka jiru waan natti mul'ateef.
Itoophiyaa keessatti akka lammii tokkootti waldandeenyee waliin jiraachuu ni dandeenya qaamni jedhu moggaatti utuu dhiibamuu nutimmoo kadhachaa jiraachuu hin dandeenyu.
Ijaaramnee biyya keenya kabachiisuu qabna.''
Dubbii Pirezidaantii Naannoo Oromiyaatiin walqabatee komii qabu dubbata Taammaanyi.
''Addeemsa jijjiiramaa kana keessatti wanti guddaan kan kaleessaa waliif dhiisnee gara fuulduraattii tarkaanfannaadha malee uummatas ta'e nama dhuunfaa miidhuuf yookiin ammoo akka diinaatti ilaaluuf miti.''
''Kanaafuu wanti raawwate dogoggora. Cabsineerra, akkas gooneerra jechuudhaan walirratti dhaadachuun qondaala mootummaa akkanaa dhiisii nama dhuunfaarraayyuu hin eegamu.
Sabni tokko yeroon keenya jechuudhaan cabsineerra jedhaa kan dhaadatu yoo ta'e eenyuufuu hin fayyadu. Walballeessuuf haala mijeessuudha kun''
''Gama biraatiin saba Amaaraa waliinis walqabsiisaniiru. GAruu Amaaras yoo ta'e, saba kamirrattiyyuu haala kanaan xiyyeeffachuun sirrii miti, yoomiyyuu nan morma.''
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad oggantoota Ginbot 7 waliin mariyatan
31 Adooleessa 2018
Daawwannaa Dr. Abiy Jabuutiitti taasisan
1 Caamsa 2018
Daawwannaa MM Abiy Awurooppaa maal irratti fuulleffate?
Daawwannaa MM Ameerikaatti: Jaawaariifi Dr. Abiy kophaatti maal mari'atan?
1 Hagayya 2018
Naannoon Amaaraa deeggarsa buqqaatotaaf Baankiin Daldalaa Itoophiyaa kenne fudhachuu dide
26 Bitooteessa 2019
'Gidiraa gammoojjii Sahaaraa sabaa fi amantaan wal danda'uu nu barsiise'
‘Boeing' awwaalcha abbaakoorratti argamee ani garuu hin dandeenye'
Haleellaa mana barnootaa Kaaliforniyaan lubbuun darbe
Qonnaan bultoonni cilalluu nyaataaf horsiisan maal jedhu?
'Dirree Dhawaatti maddeen rakkoo kan ta'an 'Saatenaawu' to'atamaa hin jiran'